यी दुई राशिका जोडी कहिल्यै छुट्टिँदैनन् ! – Jagaran Nepal
यी दुई राशिका जोडी कहिल्यै छुट्टिँदैनन् !
मानिसहरू आफ्नो पार्टनरसँग प्रेम बढाउन र उनीहरूको आफूप्रतिको प्रेम जाँच्न अनेक तरिका अपनाउँछन् । तपाईंलाई पनि यस्तो तरिका जान्न मन छ भने राशि चक्र प्रेम जाँच्ने सबभन्दा राम्रो तरिका हो । राशिको संकेतबाट तपाईं आफ्नो पार्टनरले सधैं प्रेम गर्छ कि गर्दैन, थाहा पाउन सक्नुहुन्छ।
सिंह राशि भएका मानिस अभिमानी र कहिल्यै हार नमान्ने खालका हुन्छन् । तर तुला राशि भएका पार्टनरसँग उनीहरू आफूलाई अलग महसूस गर्छन् । तुला राशि भएका मानिसको पार्टनर सिंह राशिको हो भने उनीहरूले राम्रो साथी र रक्षक प्राप्त गर्छन् । यसका साथै आफ्ना आवश्यकताहरूलाई समेत बिर्सेर उनीहरू पार्टनरलाई प्रेम र सहयोग गर्छन्।
यी दुई राशि भएका पार्टनर एकअर्काभन्दा फरक हुन्छन् । कन्या राशिका मानिस आफ्नो पार्टनरबाट जेपनि दुईगुणा पाइने अपेक्षा राख्छन् भने कुम्भ राशि भएका मानिसले रहस्यलाई सम्हालिराख्नमा विश्वास गर्छन् । तर यसको बाबजुद उनीहरू परफेक्ट पार्टनर हुन् । फरक स्वभाव भएपनि उनीहरूको प्रेम मजबुत हुन्छ।